विदेशी मुद्रा कतिमा साट्न पाइन्छ ? यस्तो छ विनिमय दर
काठमाडौं । आज एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११९.४२ र खरिद दर ११८.८२ रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको विनिमय दर तोक्दै डलरको बिक्री मूल्य तोकेको हो । यस्तै, आज डलरको खरिद मूल्य ११८.८२ रुपैयाँ कायम छ ।
राष्ट्र बैंकले एक युरोको बिक्री मूल्य १३८.५१ रुपैयाँ तोक्दा खरिद मूल्य १३७.८१ रुपैयाँ तथा पाउण्ड स्टर्लिङको बिक्री मूल्य १६२.७६ र खरिद मूल्य १६१.९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका साथै, आज अष्ट्रेलियन डलरको बिक्री मूल्य ८६.८२ र खरिद मूल्य ८६.३८ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सिंगापुर डलरको बिक्री दर ८७.९९ र खरिद दर ८७.५४ रुपैयाँ तथा १० जापानी येनको बिक्री दर १०.७४ र खरिद दर १०.६८ रुपैयाँ छ । यस्तै, चिनियाँ युवानको बिक्री १८.५२ र खरिद १८.४३ तथा साउदी रियालको बिक्री ३१.८४ र खरिद ३१.६८ रुपैयाँ तोकिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, कतारी रियालको बिक्री ३२.८० र खरिद ३२.६३ तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दिरामको बिक्री ३२.५१ र खरिद ३२.३५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, मलेसियन रिंगटको बिक्री २८.५८ र खरिद २८.४३ रुपैयाँमा हुँदा कोरियन १०० वनको बिक्री १०.०६ तथा खरिद १०.०१ रुपैयाँमा भइरहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न थाल्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले, के हो ट्रेजरी बिल ?
तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको उपकरण जडानमा चिनियाँ कम्पनीको ढिलाई, संरचना निर्माण पूरा
BREAKING NEWS – इजरायल पठाइने ११ सय ७५ जना नेपाली केयरगिभरको नाम स्वीकृत (पूर्णलिस्टसहित)
वायु सेवा निगमलाई ई–टिकेटिङ लान कति सम्भव ? यसो भन्छन् पर्यटनमन्त्री